Bartender Pyone | Food Magazine Myanmar | Page 3
Kir for Carribean
Kir for Carribean ပထမဆုံးကော့တေးလ်လေးကိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လူငယ် ကြိုက်စတိုင်လ်တစ်မျိုးနဲ့ စဖွင့်ပေးပါရစေ။ သူကတော့ Beer နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကော့တေးလ်လေးပါ။ Beer ရဲ့ Malted အရသာကို Blackcurrant အရသာချိုချိုလေးနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားပြီး Rum အနည်းငယ်ပါဝင်လို့ အရမ်းလည်းမပျော့၊ ပြင်းလည်းမပြင်းတဲ့ ....
Red Infusion နောက်ထပ် ကော့တေးလ်လေးကတော့ Jagermei-ster ကို အခြေခံထားတဲ့ ကော့တေးလ်လေးပါပဲ။ ဒီကော့ တေးလ်ကလည်း ဖျော်စပ်ရတာ လွယ်ကူသလောက် အရသာကတော့ အဓိကအားဖြင့် အရသာပျော့ပျော့ကြိုက်လေ့ရှိတဲ့ မိန်ကလေးတွေ အတွက်တော့ အတော်ပဲဖြစ်မှာပါ။ Jagermeister ရဲ့ မွှေးပျံ့ချိုအီတဲ့ အရသာကို Strawberry Flavor ....
Savory Wild မော့တေးလ်အနေနဲ့ နောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်တာကတော့ Savory Wild ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးတွေနဲ့သာ ဖျော်စပ်ထားတာမို့ သစ်သီးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ ပူလောင်ပြင်းရှတဲ့ နေ့လယ်နေ့ခင်း ရာသီဥတုအတွက်လည်း အထူးကောင်းမွန်ပြီး လုပ်ရတာလည်း လွယ်ကူတာမို့ အိမ်မှာနေရင်း အလွယ်တကူ ဖျော်သောက်လို့ရပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ....
Mango Vampire ကဲ Alcohol မပါဝင်တဲ့ မော့တေးလ်ကဏ္ဍကို ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ပထမဆုံးမော့တေးလ်အနေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Sangria Mocktail အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Vampire Mango လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းလည်း သိပ်မများသလို ပြုလုပ်ရတာလွယ်ကူပြီး မိန်းကလေးတွေနှင့် ကလေးငယ်လေးတွေပါ သောက်လို့ အဆင်ပြေမယ့် မော့တေးလ်အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ....
Brandy Velvet ပထမဆုံးကော့တေးလ်အနေနှင့်ဖော်ပြချင်တာကတော့ Brandy ကိုအခြေခံထားပြီး Chocolate အရသာတို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Brandy Velvet ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်တွေ့နေကြ ကော့တေးလ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ အချိုပွဲအနေနဲ့ ထမင်းစားပြီး သောက်သုံးနိုင်တဲ့ Dessert cocktail (Digestive Cocktail) အမျိုးအစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ကြက်ဥအကာနှင့် Brandy ....
Cantaloupe Cooler မြန်မာလို သခွားမွှေးလို့ခေါ်တဲ့ Cantaloupe Fruit ကို ဒီတိုင်းစားလည်းကောင်းသလို အစိတ်သေးသေးလေးတွေစိတ်ပြီး သကြားလေးဖြူးပြီးစားလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အခုတော့ Alcohol မပါဝင်တဲ့ Mocktail ဖျော်သောက်ကြည့်ကြပါမယ်နော်။ အခြားသော သစ်သီးတွေထက် ဗီတာမင်အေဓာတ် အများဆုံးပါဝင်တဲ့ သခွားမွှေးသီးရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အများကြီးပါ။ ....
Crystal Coco နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဖော်ပြချင်တဲ့ Cocktail လေးကတော့ အရသာဆန်းသစ်တဲ့ Crystal Coco Passion ကော့တေးလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Vodka နှင့်ဖျော်စပ်ထားတဲ့ ဒီကော့တေးလ်လေးကတော့ အုန်းသီးနံ့သင်းပျံ့ပျံ့နှင့် တစ်နေကုန်ပင်ပန်းထားသမျှကို တစ်ခွက်ထဲနဲ့ ဖြေဖျောက်ပေးနိုင်တဲ့ Refreshing Cocktail Drink လေးတစ်မျိုးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အုန်းသီးအရသာ ....